Kashifaadda diiwaaneglinta qowmiyadda Roomerka oo sii socota - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kashifaadda diiwaaneglinta qowmiyadda Roomerka oo sii socota
La daabacay måndag 23 september 2013 kl 10.29
Waxaa weli isa soo taraya wararka shaaca ka qaadaaya in boliiska Skåne uu diiwaangelin daba-gal ah ku sameeyey qowmiyadda Roomerka. Dadkaas boliisku diiwaangelinta ku sameeyey waxay isugu jiraan carruur iyo dad waaweyn, iyo weliba dad dhintay.
Khubaro iswiidhish ah ayaa sheegay in diiwaangelinta qowmiyadda Roomerku aysan ahayn wax cusub ee ay muddo dheer soo socotey. Jerzy Sarnecki oo ah khabiir ku takhasusay cilmiga dembiyadu wuxuu sheegay in uu ka fajacay oo aad uga gilgishay wararkii ku saabsanaa in boliisku diiwaangelin ku sameeyey roomerka. Wuxuu kaloo sheegay in suurtagal tahay in ay jiraan diiwaangelino aan weli la ogeyn.
– Sida ay u muuqato ma jirin kontarool dhab maadaama hawlahaan muddo la soo waday. Waa arrin lala fajaco, ayuu Jerzy Sarnecki, oo jaamacadda Stockholm ka dhiga maaddada cilmiga dembiyada.
Sarnecki wuxuu intaas ku daray in ay suurtagal tahay in shakhsiyaad boliiska ka tirsan ay diiwaangelintaan bilaabeen, laakiin diiwaan sidaas u weyni kama jiri karo boliiska iyadoo aan la wada ogeyn.
Michael Lundh oo horay uga tirsanaa boliiska ayaa sheegay in aysan ahayn wax lala fajaco in diiwaangelin lagu sameeyey qowmiyadda Roomerka. Wuxuu kaloo sheegay in uu isagu ka warhayey diiwaangelintaan muddo toban sano ka badan.
– Waxaan boliiska ka ruqseystay sannadkii 2005, laakiin waxaan sannadkii 2000 la shaqeynayey koox boliiska ka tirsan oo ku hawllanayd in ay soo ururiyaan macluumaad ku saabsan Roomerka ku nool koonfurta Iswiidhen. Mar ayaan telefoon u diray oo weyddiiyey haddii arrintaas wax ka jiraan, laakiin kama helin wax jawaab sidaas caddeyneysa. Waase ogahay in hawlahaasi socdeen waayo ilo badan ayaan ka ogaaday. Waxaan u arkaa in ay tahay wax wanaagsan in arrintaan la iftiimiyo.
Dhanka kale caalin lagu magacaabo Mark Klamberg oo jaamacadda Uppsala ka dhiga cilmiga sharciyada bulshooyinka ayaa qaba in baaritaan madaxbannaan lagu sameeyo diiwaangelinta ay boliisku ku sameeyeen kumanaan qof oo u dhashay qowmiyadda Roomerka.
– Marar badan ayaa laga hadlay dul-ka-ilaalinta iyo xaaladda cakiran ee Roomerku ku sugan yihiin, iyo in loo baahan yahay isbeddel ku dhaca bulshada iswiidhishka. Waxaan aamminsanahay in waxa laga hadlayaa uu gaaray boliiska qudhiisa.
Mar wax laga weyddiiyey sida uu u arko hadalkii uu Lars Försell oo boliiska Skåne ka socda u sheegay wargeyska Dages Nyheter oo ahayd in waxa boliisku sameeyey aysan ahayn diiwaangelin ee ay ahayd qoraalo baaritaan, Mark Klamberg ku jawaabey:
– Waxaan u arkaa hadal kalaam faaruq ah. Ma aha wax dhici in boliisku intuu magaca ka beddelo uu ku andacoodo in aysan sharciga khuseynJag tycker det är nonsens.